China Ubuciko Be Latte Ngaphandle Komshini China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ubuciko Be Latte Ngaphandle Komshini - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ubuciko Be Latte Ngaphandle Komshini)
Iphrinta ye-UV Flatbed ithatha uhlelo lokulawula ikhomputha ye-multi-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe (design) zifakiwe kukhompyutha, zingaphrinta kunoma yiluphi ulwazi ngqo. Ezifana: i-portrait, landscape, i-oli, i-ink, i-calligraphy, imidwebo yemidwebo, njll. I-Printer...
I-DTG i-Printer Flatbed A3
Uhlobo lwethu lwe- UV Flatbed Printer olujwayelekile lungaphrinta 30 * 60cm, kodwa singakwazi ukwenza ngokwezifiso ubude buka-0cm kuya ku-19cm ububanzi futhi ububanzi bokunyathelisa abukho umkhawulo ngoba ungakwazi ukwengeza imilayezo eyengeziwe yokuhola. Kungaphrinta odongeni, ingilazi, izinkuni, i-ceramic tile, njll...
Hlela kabusha iphrinta edlayo engcono kakhulu yamaqebelengwane
Iphrinta ye-Chromaprint Yokudla iyakwazi ukunyathelisa kunoma iyiphi indawo kuze kufike ku-11cm x 11cm bese kufika ku-180 mm ukuphakama. Ikuvumela ukuba udale ama-logos adlekayo noma izithombe ngqo ebusweni ngokushesha ngaphandle kwesidingo sokuthi noma yisiphi ishidi lokudlulisa nhlobo. I-Chromacake Australia -...
Qhubeka kabusha i-printer ibhuku lethebula lekhofi
Uhlelo oluzoguqula indlela yokuphuza kanye nemikhiqizo yokudla edlalwayo ethulwe futhi iyajabula. Izoba nomphumela ovelele wokubukwa ngaphambi kokunambitha ukudla okumnandi ukugcina umzuzu omuhle nenjabulo. Isithombe singakwazi ukuvela ku-100% phezu kokudla. Umkhiqizo wezobuchwepheshe unikeze ukudla okungokwesiko...
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku-
Iphrinta ye-A4 Digital Flatbed
Iphrinta ephathekayo ye-RFC A4 Digital ithatha uhlelo lokulawula ikhompiyutha yama-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-USB. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge: landscape, uhlamvu, imidwebo yendabuko yaseShayina, imidwebo yamafutha, imidwebo engenasici, ikhalligraphy kanye...
Ubuciko Be Latte Ngaphandle Komshini Ubuciko be-latte ngaphandle komshini Umenzi wobuciko be-Latte Vumela i-Cafe Latte iphrinta Umenzi we-Latte Foam Ikhofi ne-Latte Machine Printer Izibuyekezo ze-Sandals Eva Foam Printer Ukuqondisa kwi-Power Bank iphrinta yezindleko